Ragga Dharka Rugaha ugu Fiican ee Daabacaadda Gaarka ah Logo Hoodie Streetwear Black Manufacturer Manufacturer and Factory | Lijinghui
Ragga Dharka Dharka Bulshadda Daabacaadda Gaarka ah Logo Hoodie Streetwear Black Jumper
Lambarka Moodalka: JC003
Miisaanka Dharka: 240 garaam
Erayoxul: hoodie caadadiisu tahay
Shayga: OEM hoodie
Magaca badeecada Ragga Dharka Dharka Bulshadda Daabacaadda Gaarka ah Logo Hoodie Streetwear Black Jumper
Dhar 100% dhogorta cudbi.240gsm
Qaabka ragga hoodie
Qiyaasta SHAXDA (INCH)
1/2 Wareegga ugu sarreeya
Naqshadeynta Gaarka ah ee Shiinaha Hoodie Sweater iyo Qiimaha Ragga funaanadaha, Waxaad u Baahan Tahay Waa Waxa Aan Raacno.Waxaan hubnaa in badeecooyinkeennu ay kuu keeni doonaan tayada heerka koowaad, haddana waxaan si daacad ah u rajeyneynaa inaan kor u qaadno saaxiibtinimada lamaanahaaga ee adduunka oo idil. Aynu gacmaha is kaashanno si aan uga wada shaqeyno waxtarrada wadaagga ah!
China OEM China Wholesale Hoodie iyo Customized Hoodie qiimaha, Waxaan aaminsanahay adeegyadeena isdaba jooga ah ee aad u fiican inaad ka heli karto waxqabadka ugu fiican ugana qiimo jaban alaabta annaga muddo dheer. Waxaan ballanqaadeynaa inaan siino adeegyo ka wanaagsan kana aan u abuurno qiime dheeraad ah dhammaan macaamiisheena. Waxaan rajeyneynaa inaan wadajir u abuuri karno mustaqbal wanaagsan.
Waxaan ku tiirsan nahay fikirka istiraatiijiga ah, casriyeynta joogtada ah ee dhammaan qeybaha, horumarka tikniyoolajiyadda iyo dabcan shaqaalaheena sida tooska ah uga qeybqaata guusheena Gaaban Waqtiga Gaaban ee Shiinaha Tayada Sare ee 100% Cotton Thul Pullover Sweatshirt Printing iyo Embroidery OEM Custom Blank Hoodies Ragga, Wada Shaqeynta waxaa lagu dhiiri geliyaa dhammaan heerarka leh ololeyaal joogto ah. Kooxdayada cilmi baarista waxay tijaabisay horumarro kala duwan oo ka socda warshadaha si loo horumariyo inta lagu jiro alaabada.
Shiinaha Xirfadleyda Shiinaha ee Cashmere iyo qiimaha Dumarka, Ku soo dhawow inaad soo booqato shirkadeena, warshadeena iyo qolkayaga bandhigga halkaas oo lagu soo bandhigo alaabooyin timo kala duwan oo la kulmi doona rajadaada. Dhanka kale, way ku habboon tahay booqashada degelkeenna, shaqaalaheenna iibkuna waxay isku dayi doonaan sida ugu fiican inay ku siiyaan adeegga ugu fiican. Fadlan nala soo xiriir haddii aad u baahan tahay macluumaad dheeraad ah. Ujeedkeenu waa inaan ka caawinno macaamiisha inay xaqiijiyaan hadafyadooda. Waxaan wadnaa dadaal ballaaran si aan u gaarno xaaladdan guul-u-guuleysiga ah.
Hore: Jumladaha 100% Cotton blanket hoodie calaamadeysan hoodie
Xiga: Rakhcad tayo sare leh oo tayo sare leh oo daabacan ragga hoodie
Jumlada 100% Cotton madoow hoodie logo caadadii ...
Mens sweatshirt dharka waddooyinka caadiga ah oo tayo sare leh c ...
100% cudbi ragga hoodie madhan jumlada oversized ...
Custom sweatshirt pu daabacay caadadii tayo sare leh ...
Hooded Sweatshirt High Fashion Pullover Ragga Fi ...